Amazon Appeal Service, Dzorera Akaunti Yako Zvino
Akanakisa Amazon Akaunzi Inokwidza Sevhisi Vanopa
Pakave nekuchinja kukuru mu e-commerce nzvimbo. Kunyange hazvo, ivo vakatanga kwekutanga vachiri kuwana kubatsirwa kwekutengesa kwaibva. Amazon ndeimwe yemapuratifomu ayo akapayona kutenga online. Sevhisi yakatanga na Jeff Bezos pakutanga akatanga kutengesa mabhuku. Uye, ipapo vamwe vatengesi vakagamuchirwawo. Yakave yakavhurika musika wevanhu vaitengesa zvakasiyana zvigadzirwa mumapoka akasiyana.
Kana iwe ukaongorora Amazon ipapo iwe unozonzwa kuti yakafanana neinjini yekutsvaga yezvigadzirwa. Iyo ine chero chero mhando gadget kana chigadzirwa icho munhu chaungafungidzire. Amazon inoshanda senzvimbo imwechete yechinhu chero chipi zvacho. Kunyangwe, izvi zvakawanikwa nevazhinji vatengesi vane hukama nepuratifomu. Vanhu vashoma kwazvo kubva kudivi revatengi vanoziva nezve izvi. Asi, kana iwe uri mutengesi saka iwe unoziva huwandu hwemakwikwi uripo izvozvi.
Uye, pamwe nezvose zvikuru zvinoitika, vamwe vanhu vanoshuvira kukohwa izvo zvakanaka pakutanga. Vamwe vatengi vakaedza kushandisa chikuva uye vatengesi vaishuvira kuwana zvakawanda kutengesa munguva shoma. Izvi zvakaita kuti maAmazon amise mitemo nemirau pamusoro pevatengi vavo pamwe nevatengesi. Asi, ndirwo rutivi rwevatengesi rwunomiswa kazhinji nekuti ndivo vanoita zvemhando yepamusoro. Uye, kana vakatadza kudaro kana kuyedza chero nzira dzisina basa saka chikuva chine mhosva yekumisa account yavo. Mune ino mamiriro, munhu anogona kukwidza ega asi zvakaringana kutsvaga iyo Amazon kukwidza sevhisi. Sei? Nekuti iwo mikana yekuwana yako account kumiswazve munguva shoma yakanyanya kukwirira pakutanga kwekutanga.
Iye zvino kuti uzive zvakawanda nezve Amazon kukwirira sevhisi uye mutengesi account kumiswa verenga pasi pazasi.
Uyewo Verenga: MaAmazon Appeal Services anoshanda muna 2021?
Ini ndinogona kumutsidzira yangu mutengesi account pasina iyo Amazon kukwidza sevhisi?
Uyu ndeimwe yemibvunzo yakajairika iyo inobvunzwa munharaunda yevatengesi yeAmazon. Vanhu vanopa masevhisi kuburikidza neAmazon yekukumbira sevhisi, vanhu vakaita seni neni. Izvo hazvisi zvekuti iwe unogona kuzviita asi nezve kugona kwazvo. Isu tiri Amazon yekukumbira sevhisi uye tinoziva kuti haisi roketi sainzi. Asi, kuti ubudirire uye kunyatsoita chinhu chaunofanira kufarira. Kutanga, Amazon yakapa mirairo pamusoro pekukwirira. Uye, kana uine chivimbo zvakakwana enda mberi.
Asi, tinokurudzira kuti unzwisise nyaya iriko pakutanga. Kunyora an Tsamba yekuAmazon haina hunyengeri asi iwe unofanirwa kunzwisisa dambudziko uye nekuuya nemhinduro inodiwa yekugadzirisa iyo. Sezvineiwo, kana Amazon ikamisa account yemutengesi, ivo vanotumira mutengesi ziviso. Mune ino ziviso, vanotaura chikonzero nei iyo account yakamiswa. Kana iwe uchinzwisisa, edza kumisikidza tsamba inoudza Amazon kuti ungagadzirisa sei dambudziko iri. Uye, iwe unofanirwa kuve wakanyatsonzwisisa uye unzwisise nyaya. Uye chekupedzisira asi kwete chidiki, usavhunduke.
Uye, kana iwe uchingoshuvira kuburitsa izvi ipapo unogona kuhaya Amazon kukwidza sevhisi. Ini ndinogona kukuvimbisa iwe kuti zvakakodzera kukosha kwako kunyanya kana iwe uri kurasikirwa bhizinesi zuva nezuva panguva yekumiswa.
Zvikonzero zviri kumashure kweAmazon Mutengesi Akaundi Kumiswa
Nehuwandu hwezvigadzirwa zviri kuwedzera papuratifomu, huwandu hwezvikonzero nei mumwe achigona kumiswa hunowedzerawo. Sei? Nekuti pane nzira dzinopfuura imwe chete vatengesi vangave vari kutyora. Uye, nenharaunda yakakura kudaro, zvinonetsekana kuti panofanirwa kunge paine runyorwa kwete pane mapoinzi mashoma. Naizvozvo pazasi tataura zvimwe zvikonzero zvakajairika kuseri kwekumiswa kwevatengesi muAmazon:
Multiple Accounts: Kana uine akawanda maakaunzi maakaunzi kuAmazon saka mikana iwe unogona kuwana kumiswa. Amazon inobvumidza imwe account yemutengesi pamunhu. Iyo AI algorithm inokwanisa kuongorora ako magwaro. Uye, kana ichienderana neimwe account, imwe inogona kuwana sitiroko yekumisa uye ingangoda basa rekukumbira reAmazon.
Chinyorwa chisina kukodzera: Sezvinoenderana nhungamiro neAmazon, kune zvimwe zvigadzirwa izvo munhu zvaasingakwanise kutengesa papuratifomu. Izvi zvinogona kuve zvakanangana nenyika kana kungorambidzwa neAmazon, papuratifomu. Semuenzaniso muIndia kutengesa matoyi evakuru zvakarambidzwa uye saka hapana munhu anotenderwa kuzvitengesa. Uye, kana ukabatwa uchivatengesa kuAmazon saka account yako inowana kukwidzwa kumisikidzwa.
Kushambadza yako webhusaiti: Amazon inobvumidza kutengeswa kwezvigadzirwa zvakasiyana kubva kumhando dzakasiyana dzine yavo webhusaiti. Asi, hazvivabvumidze kushambadzira yavo e-commerce chikuva. Kana iwe uri kuzviita saka ungangoda iyo Amazon kukwidza sevhisi.
Kunyora Inauthentic Item: Kana vatengi vakanyora chigadzirwa chako seichouthentic saka account yako inogona kumiswa. Kune akawanda mazita kuAmazon anozviti ndeyechokwadi asi asiri. Kana izvi zviri izvo nezvako chigadzirwa ipapo ini ndinokupa zano kuti umire kuitengesa.
Chinyorwa Chekunyepedzera Chinhu: Uyu haasi-brainer, kutengesa chero chinhu chekunyepedzera hachisi pamutemo. Amazon inozviona ichitendeseka kune zvese zvigadzirwa zvakanyorwa papuratifomu. Kana iwe uri mumwe munhu arikutengesa chero chinhu chaunofunga kuti chingangove chekunyepera wobva wawana data rakakosha nezve chigadzirwa. Uye, kana zvichibvira chingorega kutengesa kusvikira wawana kujeka.
Zvichemo Zvekuchengetedza: Amazon iri pachinhu zvakanyanya kana zvasvika pamitemo yekuchengetedza. Kana chigadzirwa chako chikatadzira icho nemukana chero upi zvawo, ita shuwa kuti iwe unogadzirisa kana kungorega kuitengesa.
Mifananidzo inorambidzwa: Kune akawanda emhando kana zvasvika kumifananidzo inorambidzwa. Kana iwe wakatumira chifananidzo chinoita kunge chisina kukodzera kuchikuva chibvise. Zvakare, mumwe haatenderwe kushandisa mufananidzo wechigadzirwa chemumwe munhu. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvakajairika kumashure kwekumiswa kwemutengesi. Mibvunzo mizhinji yatinogashira inoenderana nezve ichi chiitiko chimwe. Vatengesi vanowanzo shandisa mifananidzo yavasina mvumo. Kana iwe uri kuita izvi wobva wamira, izvi zvinoreva kuti uri kutyora iyo IP marongero uye ingangoda iyo Amazon kukwidza sevhisi.
Chinhu chakashandiswa Kutengeswa: Amazon inobvumidza kutengesa zvinhu zvakashandiswa asi muchikamu cheyakagadziriswazve. Kana iwe uri kutengesa chakashandiswa chinhu sechitsva saka akaipa mutengi ongororo anogona kukutora iwe pane cusp yekumiswa. Dzivisa izvi uye ita chokwadi chese chaunotengesa chiri chitsva semhepo.
Zvinhu zvakapera: Amazon iri zvakare kumba kwezvinhu zvinoparara. Amazon inowanzo kuzivikanwa nemagajeti asi zvakare inotengesa huwandu hwezvimwe zvigadzirwa. Kana iwe uri kutengesa chigadzirwa icho chapera saka inogona kuve hombe tsvuku mureza. Iwe unofanirwa kuchengeta cheki yezvigadzirwa zvauri kuendesa. Ita shuwa kuti unobata Amazon sebhizimusi chero repamutemo. Izvo zvinokwanisika kuwana kudzoreredzwa asi zviitiko zvakadaro zvinoita kuti basa riomere basa reAmazon rekukumbira futi.
Chinhu hachina kutengeswa sekutsanangurwa: Tsananguro yechigadzirwa inyaya yakakura kwazvo. Zvinonzwisisika, mumwe anofanirwa kurwisa kukwikwidza kwakaomarara. Asi, hachisi chikonzero chekutsvaga mapfupi apo chikuva chinozvidza kwazvo. Vazhinji vatengesi vanotsanangura kugona kwechigadzirwa zvakanyanya kuwedzeredza kupfuura zvavanofanira kuve. Kana iwe uri kuwana isina kunaka mhinduro nezvazvo saka imhosva yako zvachose. Tsananguro inoitirwa kuratidzira chigadzirwa chako nenzira chaiyo uye yechokwadi. Uye vimba neni, ndiyo nzira yekuve nerunyararo bhizinesi ruzivo papuratifomu. Naizvozvo, kana iwe usinga shungu yekuhaya yeAmazon kukwidza sevhisi yakanangana nekudzoreredza wobva waidzivirira zvachose
Yakakwira Order Yehurema Rate: ODR kana Order Yekuremara Rate ndiyo muzana yemitemo yakaremara iri kutumirwa newe. Imhosva huru pamberi pechikuva. Sezvineiwo, Amazon inongobvumidza ODR isina kukwira kupfuura 1%. Naizvozvo, kana iwe uri kuwana chero kunyunyuta nezve chakaremara chigadzirwa, ita shuwa kuti unochigadzirisa isati yakwana nguva.
Yakanyanya yakaipa vatengi ruzivo (NCX): Kuongorora kwevatengi igirazi rerudzi rwebasa rauri kupa vatengi vako. Kana iwe uri kugara uchiwana yakaipa ongororo mikana chiri chigadzirwa chiri kukanganisa. Kana izvi zviri kuitika kwauri tora nekukurumidza matanho. Sezvineiwo, seAmazon yekukumbira sevhisi, tinokumbira vatengi vedu kuti vaite zvakafanana. Zviri nyore kuti uchinje zvauri kutengesa pane kurasikirwa neakaundi account yako.
Saka izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvakajairika kumashure kwekumiswa kwemutengesi. Kana iwe uchifungidzira kuti account yako inogona kukanganisa chero munhu pakati payo wozoitarisa ASAP. Kunze kweizvi, pane kazhinji nguva apo account inomiswa nezvikonzero zvakawanda. Zvinogona kuve zvakaoma kuzvinetsa asi ita kuti kuongorora kwako kuve kwakakwana sezvinobvira. Uye chiite pairi ASAP, uchisiya ichi gadzirira ramangwana rinogona kukuwanira stereki. Izvo zvakaitika nevamwe vedu vatengi munguva yakapfuura uye zvinogona kuitika newe futi.
Akaundi Yakamiswa? Fonera Isu Zvino!
Basa Redu rekukwidza rinogona sei kukubatsira?
Paunenge uchitaura nezve Amazon kukwidza sevhisi, tsamba yekukumbira inoita basa guru mairi. Tsamba yekukumbira yeAmazon ndiyo chete kutaurirana pakati pako neAmazon iyo inogona kudzoreredza account yako. Kana isina kumhara munzira kwayo zvinogona kutora nguva. Chaizvoizvo, ichi ndicho chikonzero nei vanhu vazhinji hire an Amazon Appeal Service. Sezvambotaurwa, zviri nyore kuti account yako idzorerwe mukutanga kuyedza. Zvikasadaro, zvinogona kutora yakawanda nguva uye zvinogona kupedzisira kurasikirwa iwe mitoro yebhizinesi.
Zvino, kana tikaramba tichitaura nezvenyaya iyi tsamba yekukumbira yeAmazon ndiyo dhishi hombe asi chinongedzo chepakati ndicho Chirongwa Chekuita. Chirongwa chekuita matanho akakodzera atichatora kugadzirisa nyaya yakaziviswa neAmazon. Kuti tidaro, pane akati wandei zvinhu isu tinoteerera kune:
Verenga ziviso yakatumirwa neAmazon nokungwarira.
Tora pfungwa yakajeka nezvenyaya iripedyo uye kuti account yako iri kutyora sei.
Iye zvino gadzira matanho anodiwa, kuti uchave uchigadzirisa sei.
Izvo zvakanyanya kujekesa kupfuura izvi asi iwo matanho ndiwo epakati zvigadzirwa. Zvakare, kudzoreredza kwese kwakasarudzika, saka, zvinove zvakakosha kuti isu titarise kune imwe neimwe & yega kudzoreredzwa zvakasiyana. Kunyangwe, ruzivo rwedu neaya runogara ruchiita kuti zvive nyore kwatiri kubata chero chikumbiro.
Tarisa Ongororo Yedu yeAmazon Suspension Appeal
Mushure mekunge tapedza kugadzira chirongwa chezviito kune mumwe mubvunzo, tinoenderera mberi nekunyora tsamba yekukumbira yeAmazon. Yakafanana nechero imwe tsamba asi yakati siyanei zvishoma. Chinangwa ndechekutaura zvakanyanya sezvinobvira mune zvishoma sezvinobvira. Uye pamusoro payo, gadzirwa zvishoma. Naizvozvo, pazasi pane mamwe maitiro atinotevera.
Pfupiso & Nomazvo: Sezvambotaurwa, "Taura zvakawanda uine mashoma mazwi". Kune zvakawanda zvakakumbirwa izvo maAmazon anowana zuva nezuva. Naizvozvo, zvinova zvakakosha kuti titaure zvese nenzira iri nyore. Uye edza kuzviita zvipfupi zvakakwana kuti mumiriri averenge zviri nyore.
Chirongwa Chekuita: Sezvo isu takatouya nehurongwa hwekuita, ino yave nguva yekuzvitsanangura nemazvo. Isu tinoedza kushandisa mabara maputi kuti tiwedzere kushanda kana zvasvika pakuongorora tsamba. Uye pamusoro payo, poindi yega yega inoratidza pachena matanho atiri kutora.
Urongwa: Zvese zvinyorwa zvakanyorwa chidimbu chenyaya ine rondedzero. Tiri kutaura izvi nekuti rondedzero yakakosha. Isu tinove nechokwadi chekuti tinotaura zvese zvakarongeka uye tinotora yega & yega nyaya imwe neimwe tichitsanangura maitirwo ayo.
Madudzirwo: Izvo zvakakosha kuchengetedza matauriro etsamba mukutarisa. Mumwe anofanirwa kunzwisisa kuti kugona kutengesa paAmazon ndiwo mukana. Kuchengeta kufunga uku, tsamba yese inovakwa. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti iyi mirau & mirau ndeyevatengesi ivo pachavo mukufamba kwenguva. Kana iwe uri munhu akavimbika anoshanda nesimba kuyedza kuita yako kurarama nenzira kwayo ipapo iwe unozonzwisisa kuti nei izvi zvichiitika.
Sevhisi yeAmazon yekukumbira, isu tinotora kuvakwa kwechikumbiro zvakanyanya. Iri nderimwe remabasa edu epamoyo uye isu tinozvitora isu pachedu.
Yakanakisa Nguva yekudzoreredzwa kweiye Mutengesi Akaundi
Iko hakuna chaiko nenguva. Sezvambotaurwa kusati kwadzorerwa dzese dzakasarudzika mupfungwa dzayo. Isu takaona nguva apo tsamba dzedu dzekukwirira dzakadzorera maakaundi mukati me24 hrs. Kunyangwe, kana mutengi achiuya kwatiri akavanda achiedza tsamba yekudzoreredzwa, kudzoreredza kunogona kutora nguva. Neye kukwidza kweAmazon, kekutanga-nguva ndiyo runako, saka, ita shuwa kuti tsamba yekukwezva amazon yakaringana kwenguva yekutanga iyo pachayo.
Ungadzivirira sei kumiswa kweakaundi mune ramangwana?
Pane nzira mbiri dzaungaite izvi. Chekutanga ndechekuita nezve chimwe nechimwe. Yechipiri ndeyekuhaya iyo Amazon kukwidza sevhisi. Kune akawanda masevhisi kusanganisira isu ayo anopa kusimudzira kudzivirira. Hapana mubvunzo kuti zvinogona kunetsa kubata akawanda mabasa kamwechete. Ichi ndicho chikonzero nei vatengesi vazhinji vachipa kunze kuchengetedza kwevatengesi account yavo kuAmazon services services.
Kana iwe uri mumwe munhu arikutsvaga Amazon kukwidza sevhisi saka pamwe tinogona kubatsira. Isu tinopa masevhisi senge Mutengesi anomisa kudzivirira, kuongororwa kweakaundi account hutano, uye kuwedzera kwekutengesa. Naizvozvo, kana iwe uchifarira tora yako yemahara kubvunza na nekudzvanya pano.